Yazi isikhathi manje okungagcini nje obondeni noma ithebula iwashi, kodwa Ukubheka ikhompyutha qapha noma ukubonisa ekhaya Imishini. Kude kubo ngalezi zinhloso avame ukusetshenziswa iselula. Kodwa konke lokhu akusho kunganciphisa indima amawashi ezinhle. Abakwazi ukutshela okuningi mayelana nesimo, ukunambitheka noma ngohlamvu yomnikazi. Futhi amahora, izintokazi eziningi ekhangayo ethanda izimfashini ezimbalwa "Geneva", ikakhulukazi wayibhinca abicah.
Gqamisa Sekuqediwe akuyona kuphela elula futhi kunengqondo, kodwa futhi uvumele ukukhombisa isitayela, ukubonisa ukuzithiba sokugcina isikhathi. Chic amawashi okunethezeka ukugcizelela isikhundla amadoda nabesifazane esihlakaleni uzobe waqonda njengoba ucezu zokuhloba. Amamodeli fashion design kuyoba esiphelele umphelelisi isithombe kwansuku ngawo ngokuphelele ukubhekana Geneva iwashi. Kulokhu, sha Nokho akuyona ezibizayo futhi sibe sinezinto umlando wasendulo, kodwa yayina kakhulu ukuthandwa sibonga izinga okusezingeni nisondele angajwayelekile nokunakwa ukuklama.
Kancane mayelana brand "Geneva"
Brand Geneva, abantu abaningi baye bathola nge obhekwe amahora ne abicah wayibhinca - umkhuba imfashini kusenza sibheke lokhu nje umkhiqizo. Kodwa kukhona inkampani emakethe amashumi amabili eminyaka. Umsunguli wawo baba G. R. Saedi. Brand Gqi Geneva Quartz ukhiqiza asebenza ngebhethri amawashi nge dials analog. Manje, zikhona imigqa eminingana kwabesilisa nabesifazane, abaneminyaka izitayela ezihlukahlukene: ezemidlalo, classic, ubuciko Deco, ngisho avant-garde. Isici se-brand inhlanganisela ngokumangalisayo elula okunethezeka. Futhi ingenye yezindawo zokugcina okutholakele okukhulu kwaba ukuklanywa iwashi ne abicah wayibhinca ezihlukahlukene imibala, okuyinto iye yatha- engakaze ibonwe.
Umnikazi wagcizelela kaningi ukuthi iwashi umenzi kukhona of high: ukuthi alungile kahle futhi ngendlela emangalisayo enhle. Lokhu akusona isimanga, uma sihlaziya indlela yenkampani imikhiqizo yayo. Geneva amawashi badalwe imishini yesimanje Melika, abakhiqizi abakakhohlwa izindlela ezindala uhloniphe ngamasiko asendulo. Leyo mikhumbi amasha yakhelwe futhi lakhiwa beqondiswa umsunguli. into ngayinye kahle kusetshenzwe, okwathi ngemva kwalokho umhlangano yanikezwa watchmakers professional nakho ocebile. On ngemuva esandleni ulotshwe nesiginesha Saedi. Ngaphambi kokungena imodeli emakethe kukhona amasheke engaphezu kwemibili kweshumi.
Geneva ukubukela: umkhiqizo uhla
Ukuqinisekisa ukuthi izinga imikhiqizo, wadala ne abicah wayibhinca, abaningi sebeqala ukufuna omunye abakhiqizi iwashi esasiyofika ngaphansi esiqinile ngubo classical abesifazane noma senzelwe amadoda. Le nkampani iye yalungiselela ububanzi ngokwanele ububanzi imikhiqizo. Iqoqo emikhulu Ladies, Value engaphezulu, Exclusive, Ezemidlalo Fashion okuphezulu. onobuhle Iduna nensikazi yakhelwe obunobunye inhlanganisela yemfashini. Saedi waqinisekisa ukuthi sha isibe liyabonakala ngempela.
Ukwahlulela ngokubukeka izibuyekezo eziningi, design luningi kwenza Geneva watch-accessory othandeakayo abantu bathanda izinto ezingafani. Ikakhulukazi baphumelele kulolu lady. Banakekela eyolanda imodeli zakudala futhi elicwengiweyo, bonisa ubuntu bakho eliqhakazile anemibala ocebile ezimibalabala imikhiqizo emisha. Kukhona kungenzeka ukuba ukhethe imodeli ngaphandle kwemininingwane ezingadingekile, isibonelo, ezemidlalo isitayela. Nokho, uma ufuna ukuthenga amawashi ezingcono ngokuvamile akhokhe amehlo imiklamo nge amakristalu, kuhlanganise wayibhinca abicah.
Awu ezicatshangwe ukuklanywa iwashi "Geneva"
okuvelayo okunjalo omuhle umkhiqizo "Geneva" kuyinto ngenjongo ecashile. Akhethiwe ngokucophelela usayizi umzimba kanye isongo, umklamo Ukudayela ithuthukiswe ngisho usayizi imicibisholo. Ungakhetha imodeli round hhayi kuphela, kodwa futhi nge shape square futhi unxande izindlu. Ngaphezu kwalokho, kungenziwa ehlotshiswe amatshe. Kwezinye onobuhle, kukhona dials encane main-amawashi, kodwa abawona asebenzayo futhi asetshenziselwa ubuhle. Muva nje, abantu abaningi bakhetha ukubukela abicah wayibhinca, kodwa kukhona kakade izinguqulo ajwayelekile zakudala.
Ikakhulukazi ukunambitheka kubathengi akhawunti dials ezikhangayo zesi-Arabhu noma Roman, elandelanayo noma Ulungise ngokusebenzisa omunye - kuhle futhi zikhululekile. Kodwa zikhona eziningi amakhasimende ufuna imodeli ngamalebula endaweni ihora izinkomba, bakubheka njengobuthakathaka sikubeke ngaphezulu. Kunoma ikuphi, abanikazi imiklamo ezahlukene bavumelane definition esihle, okuyinto akudingi nzima amehlo akho. Izindlela zakamuva zihlukaniswa khona neqiniso lokuthi akuyona yonke izibalo for the amahora zibhaliswe, kodwa indices ngomzuzu (nge zemizuzu emihlanu ngezikhawu) enisemikhawulweni mshini.
Ukwahlulela ukubuyekezwa, amakhasimende wanelisa futhi ukunemba mshini uqobo. Izinga wokugcina, zonke izingxenye Uthola a lot of ukunakwa. Geneva Buka (wokuqala) ifakwe bangempela Swiss asebenza ngebhethri ukunyakaza, kodwa futhi ukuba butholakale imodeli emakethe, ne indlela Lokudabuka Japanese. Elula, ngokuvumelana iningi, kanye crystal ukuthi lusebenza ku amabhethri futhi ayidingi ifektri njalo. Kanye ngonyaka, ibhethri lashintsha laba entsha nganoma isiphi workshop ihora.
Owaziwayo kanye nezinye izici ukusebenza emnandi. Ngakho, ukuhunyushwa imicibisholo kwenziwe kalula clockwork pin retractable. Lokhu isigwedlo yize kungadingeki isitshalo, kodwa isetshenziselwe ukusetha sikhatsi lesingiso. Kuyadingeka ukuba ibenze futhi uphenduke ngokwewashi kuze lesifanele isandla isikhundla futhi ubuyele isikhundla ukuqala. Iningi abathengi iyakwamukela ukuthi ngisho ezidingekayo ngesikhathi isethaphu kokuqala, shrunken ekushintsheni amabhethri noma ukuthuthela izoni yesikhathi ehlukile, njengoba indlela othembekile nonembile kuthiwa ngeziphambeko engavamile.
Kufanele futhi ucabangele izinto kusukela okwakwenza imikhiqizo brand. A real hit nge abathengi Geneva steel iwashi ne abicah wayibhinca, etholakala anhlobonhlobo imibala. Silicone isongo kuyinto hypoallergenic ukuthi amakhasimende amaningi okuthiwa esibalulekile. Akuve aminyene futhi eyizingqabavu, nge elithambile, ukhululekile futhi kumnandi uma uyithinta. Kulula ukunakekela, kusukela akesabi ngothuli, ukungcola kanye nomswakama ngokweqile. Ngakho ukuthi yokufuna esinjalo linokwethenjelwa ejabulisa Shopper ngamunye.
Kodwa ungase futhi ukhethe ezinye izinto. Bonke bangabangasokile izinga okusezingeni futhi kusetshenzwe kahle. Leli bhokisi is ezenziwe ngensimbi engagqwali noma isongo zegolide zingenziwa ukwaziswa okufanayo. Futhi ngokuvamile esetshenziswa wayekhona lesikhumba. Emizimbeni umbala esetshenziswa engagqwali anodized. Nobufakazi ukuqinisekisa ukuthi crystal amaminerali kuyinto ekuqaleni ukumelana.
Breakout eseyintsha eliqhakazile abicah
iwashi multi-anemibala ne abicah wayibhinca waba hit kusukela 2013. Kuyinto ba enisezweni abaholayo search, kulotshiwe ngazo Izibuyekezo kakhulu, kwathiwa bayahlonishwa kubo. Ngezinye izikhathi zibizwa ngokuthi amamodeli we unisex, kodwa esihlakaleni lomame ukubukela Geneva Wena, eyenzelwe engxenyeni enhle lwesintu. Zonke uyavuma ukuthi umklamo nobungqabavu imibala zabo zikanokusho isipikili ukunakwa. Ziyakwazi kulula ukuqhubeka isithombe oyifunayo, thola inhlanganisela umhlabeleli nge umlingisi kanye ikhabethe.
Ngokusho abesifazane, ukukhanya kanye yinkimbinkimbi kanyekanye sihlanganise Geneva - watch zesifazane. Ahloselwe amantombazane lisebenza abasha, esebenzayo futhi eyinkimbinkimbi. Amahora ladvwetjelwe isitayela iyoba kuthintwa kokuphothula futhi uzokwenza ngendlela ehlukile yasekuqaleni. Ngokwe-nokubuyekezwa, bona baze bakwazi ukuphakamisa isimo futhi sijabulise iso. Abaningi ladies ayeshesha ukuthenga amahora ambalwa ezihlukile ngakho ukubukisa ukuthi njalo ungakhetha inhlanganisela umhlabeleli izingubo nezinye izinsimbi. Kulesi okucabangwayo lapho ukuze ujike: Ungakwazi sizigqoke njengoba accessory ahlukene, kodwa ngisho kangcono lapho zibheka khona, sizungezwe namasongo ekhethwe kahle ukuthi avame umnikazi we iwashi elinjalo ezithombeni zabo.
Lokho Geneva iwashi show ubuntu uvumele esiphezulu ukuthi ikakhulukazi like amantombazane. A ezihlukahlukene amamodeli intengo imali kwenza kube nokwenzeka eyolanda amakhophi ambalwa for izikhathi ezahlukene. Ezinye ingasetshenziswa emini, ngiphakamisa umbala izingubo, abanye uyithathele kusihlwa futhi imikhosi, kuqhakambisa nezinye izesekeli. Ngezinye izikhathi ekufuneni iwashi elikhanyayo onjengomlilo, futhi abanye bakhetha hhayi amaphethini kancane emibalabala Motifs ezimibalabala futhi wayibhinca abicah. Nokho, izinguqulo ezifanele ngezinye izikhathi ezingaphezu futhi eyinkimbinkimbi zakudala. Futhi konke lokhu kungatholakala ngaphakathi brand efanayo.
Brand wayakhe kahle ngokwaso njengoba izinga nobuhle imiklamo. Zonke ezinhle Geneva iwashi. Izithombe okusesihlokweni esithi, uqinisekise ukuthi ngempela kukhona inala ongakhetha kuzo. Akunandaba ukuthi lezi amawashi akuzona igolide futhi ehlotshiswe namatshe ayigugu - zisatholakala stylish, ekhangayo futhi ethandwa. Ziyakwazi kulula ukuba spotlight. Ngiyakuthanda lokhu iwashi nezinkanyezi. Ngokwesibonelo, onobuhle eziningana abe ezihlukile Nastya Kamensky.
Kungakhathaliseki ukuthenga iwashi "Geneva"
Inhlanganisela intengo nekhwalithi zinhle kakhulu kulezi amahora eziphawula yonke umnikazi wabo. Banikezwe bebaningi abantu onobuhle ne abicah wayibhinca, uzithola abaningi babheka isixazululo ezinengqondo. Kodwa imfashini kufushane, ngakho ukuyikhokhela nakho kufeza indima enkulu lapha. Ngempela, ukuze baye sise ukuphakama ifeshini iwashi "Geneva" kwakulula. Kuyini nice ikakhulukazi kuba ukuzimisela abanikazi amakhophi eyodwa noma ezimbili ukuthengwa onobuhle eziningana ukudala izithombe ezahlukene ku kwemizwa.
Mayelana le-accessory njengoba Geneva iwashi, impendulo sihlale sisihle, okufakazela ukwenza ngokuvumelana nezici wamemezela. Yiqiniso, udinga uzothenga nabaphakeli Esinokwethenjelwa, enikeza isiqinisekiso ke abazokhonza eside futhi lemukelekako. Umlindo iza ibhethri, futhi ngezinye izikhathi zihlanganisa spare.
Uchwepheshe - specialist jikelele